Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työelämästä somaliksi - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu
Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työelämästä somaliksi
Su’aalo iyo jawaabo ku saabsan korona iyo shaqada
Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työelämästä somalin kielellä
Shaqada miyaa laga maqnaan karaa haddii qofka ka maqnaanaya ama qof u dhow qofkaas ay isaga ilaaliyaan inay qaadaan cudurka? Waa maxay ujeedada waajibka shaqadu, saamaynse ma ku leedahay xaaladda caadiga ka baxsan ee fayruska koronuhu uu keenay?
Shaqada qofku go'aan uu iskii u qaatay ugama maqnaan karo. Heshiiska shaqada ee waajibaadka shaqaynta ayaa qabanaya qofka xataa marka lagu jiro xilligga faafitaanka fayraska. Goobo shaqo oo badan waxaa lagu heshiiyay in shaqada guryaha lagu qaban karo haddii ay suuro gal tahay.
Shaqaaluhu wuxuu shaqada ka maqnaan karaa haddii lagama maarmaan ay tahay in uu xaadir u ahaado tusaale ahaan ilmihiisa yar oo xanaano-maalmeedka ama iskoolka laga xidhay. Sharcigu qofka xaq uma siinayo in uu qofku mishaar qaato muddada maqnaanshaha laakiin shardiyada shaqada waxaa macquul ah inay ku jiraan awaamiir ay muhiim tahay in dib loo fiiriyo.
Ma suurtogal baa in shaqobixiyuhu uu qofka ku khasbo in uu shaqada soo galo? Waa maxay macnaha shaqada gurmadka ah miyaana laga helaa mishaar?
Waajibka shaqada ee heshiiska shaqada ku qoran waa mid shaqaynaya xataa wakhtiga lagu jiro xilligga faafitaanka fayraska.
Xilligga faafitaanka fayrasku wuxuu keeni karaa xaalado sababi kara in marxalad aanan hore loogu xisaabtamin ama loo sii ogayn ay kalifto in hore u socodka caadiga ah ee noloshu ay khalkhal gasho ama uu jiro fursad ay khalkhal ku gali karto. Marxaladaha noocaas ah shaqo bixiyaha waxaa u bannaan in uu shaqo gurmad ah xukumo. Taasna waxaa dheer in shaqada gurmadka ah ay banaantahay in la amro oo la qabto marka ay jirto xaalad aanan hore loo sii ogayn oo halis ku keeni karta nafta, caafimaadka, maalka ama deegaanka.
Shaqada gurmadka ah waxaa la amri karaa in la qabto wakhtiga shaqada ee caadiga ah in ka baxsan haddii ay dantu kalifto waxaana la amri karaa in la qabto labo todobaad muddo ah markiiba. Wakhtiga shaqada ah ee caadiga ah ee ugu badan wakhtiga ka baxsan ee shaqada gurmadka ah la qabanayo waxaa lagu qaadanayaa mishaarka shaqada mid dheeraad ka ah.
Sharcigu shaqaalaha shaqooyinka kala duwan ka shaqeeya miyuu si isku mid ah u saamaynayaa?
Guud ahaan haa. Noocyada shaqooyinka ah qaarkood si dabiici ah ayay astaamo kala duwan u leeyihiin taasina waxay keenaysa inay sharciyadoodu kala duwanyihiin. Tusaale ahaan shaqada habeenkii isbitaalada oo kaliya ayay u banaantahay, in kasto shaqooyinka noocyo badan oo ka mid ah ay mamnuuc tahay in shaqo habeen lagu amro shaqaalaha.
Shaqobixiyuhu fasaxayga miyuu dib u durkin karaa? Miyuuse igu amri karaa in aan fasaxayga sanadlaha ah wakhtiga aan ugu talo galay wakhti ka horeeya qaato?
Sida caadiga ah qaadashada fasaxyada sanadlaha ah waxaa ka wada heshiiya shaqobixiyaha iyo shaqaalaha.
Wakhtiga fasaxa sanadka gudihiisa la qaadanayo shaqobixiyaha ayaa awood u leh in uu amro. Shaqobixiyuhu wuxuu amri karaa fasaxa sanadlaha in loo qaato sida uu dhigay sharciga fasaxyada sanadlaha ah wakhtiyada loo qabtay oo kala ah fasaxa xagaaga oo u dhaxeeya 2.5-30.9 iyo fasaxa jiilaalka oo u dhaxeeya 1.10-30.4. Shaqoyinka qaarkood waxay leeyihiin awaamiir shaqo oo dhigaya in fasaxyadooda xagaagu wakhti ahaan ay ka duwanaadaan sida caadiga ah. Waa in fasaxa xagaaga iyo fasaxa jiilaalka si is daba joog ah loo siiyaa qofka haddii aanay jirin sabab keenaysa in loo baahdo in fasaxa xagaaga la kala qaybiyo oo inta ka badan 12 maalin oo shaqo wakhti kale la qaato mar kale ama marar kale shaqadu inay socoto.
Shaqo bixiyuhu marka uu qofka ku xukumo wakhtiga fasaxa sanadlaha waan uu shaqobixiyuhu ogaysiiyaa shqaalaha arrinkaas ugu dambeyn bil kahor inta aanu fasaxa sanadluhu u bilaabanin. Arrinkaas waxaa laga leexan karaa oo kaliya haddii muddada sugitaanka ee bisha ah aanay suuro gal ahayn in la fuliyo. Markaas waa in qaadashada fasaxa sanadlaha ah wakhtigiisa sida ugu dhakhsaha badan qofka loo ogaysiiyaa, laakiin ugu dambeyn labo todobaad kahor inta aanu fasaxu bilaabanin.
Haddii shaqobixiyuhu uu ogaysiiyay wakhtiga fasaxa sanadluhu uu ku beeganyahay taas oo ay macnaheedu tahay in shaqobixiyaha iyo shaqaaluhu dhexdooda ay ka heshiiyeen wakhtiga fasaxa sannadlaha ah haddii shaqobixiyuhu uu kaligii baddalo wakhtiga fasaxa sanadlaha ah loo qorsheeyay waa in uu shaqaalaha u magdhabaa dhibka kasoo gaadha go'aankaas sida uu dhigayo sharciga heshiisyada shaqadu. Shaqaaluhu si kasta wuu ku khasbanyahay in uu fasaxiisa u qaato sida uu shaqobixiyuhu u dajjiyay xataa haddii uu shaqobixiyuhu sharciyada si lid ku ah u baddalo wakhtiga fasaxa sannadlaha.
Shaqobixiyuhu ma joojin karo fasaxa sanadlaha haddii fasaxa la galayba. Shaqaalaha shaqadoodu joogtada tahay dhinaca shardiyada waxaa jira amaro la xidhiidha joojinta fasaxyada sannadlaha ah.
Wakhtiyada fasaxyada sannadlaha ah waa la baddali karaa mar kasta oo ay shaqobixiyaha iyo shaqaaluhu ku heshiiyaan.
Waa maxay macnaha amniga isbaddalka ee shaqaalaha, sideede loo fulinayaa arrinkaas marka lagu jiro xaaladda fayruska koronaha?
Ujeedada amniga isbaddalku waa in ay jiraan sababo la xidhiidha dhaqaalaha iyo wax soo saar oo dadajinaya helidda shaqo cusub ee shaqaalaha shaqo laga joojiyay muddada uu wali ku jiro muddada burinta heshiiska shaqada. Amniga isbaddalku waxa ku jira xayndaabkiisa shaqaalaha heshiiskooda shaqo la buriyay iyo kuwa shaqooyinka laga fadhiisiyay haddii shardiyadooda shaqadu ay buuxsamaan.
Amniga isbaddalka shaqaalaha xaq u leh wuxuu leeyay fasax mishaar uu ku qaadanayo oo muddada burinta heshiiska shaqada ku jira marka uu shaqo cusub dalbanayo ama uu samaysanayo qorshe uu ku shaqo galayo ama uu fulinayo waxqabad la xidhiidha qorsaha uu ku shaqo galayo. Muddada uu fasaxu yahay waxaa lagu qoondeynayaa muddada burinta heshiiska shaqada, waxayna u dhaxaysaa 5-20 maalmood. Fasaxaas ma aha in shirkadda ay uga timaado dhaawac la taaban karo waana in shaqobixiyaha wakhtiga ugu horeeya ee suurotogalka ah la sii ogaysiiyaa. Amniga isbaddalka waxaa ka mid ah fursadda uu qofku ku heli karo lacagta maalinlaha ah ee dakhliga qofka ku xidhan oo la kordhiyay muddada uu qofku ku jiro adeegyada shaqo galinta fududaynaya. Lacagta maalinlaha ah ee dakhliga u dhiganta ama lacagta shaqo la'aanta waxaa la bixin karaa ugu badnaan 200 maalin muddo ah.
Haddii shaqobixiyaha ay si joogto ah ugu shaqaynayeen ugu yaraan 30 qof si isdaba joog ah ugu yaraan muddo shan sano ah waa in dadka shaqada laga saaray loo suuro galiyaa fursad shaqobixiyuhu uu suurtogaliyay oo uu lacagteeda bixinayo oo tababar ama waxbarasho ah ujeedadeeduna ay tahay in ay horumariso fursadda shaqo helidda ah ee shaqaalaha. Shaqobixiyaha iyo shaqaaluhu waxay ku heshiin karan in shaqobixiyuhu uu waajibkiisaa gudanayo isaga oo bixinaya kharashka koorsada ama tababarka uu shaqaaluhu soo raadsado oo qayb ahaan ah ama gabi ahaan ah.
Amniga isbaddalka waxaa kaloo ku jira waajibaadka shaqobixiyaha ee ah in uu qabanqaabiyo daryeelka caafimaadka ee shaqada ee shaqaalaha shaqada looga joojiyay sababo la xidhiidha dhaqaalaha ama wax soo saarka muddo lix bilood ah kaddib marka heshiishka shaqadu uu ka dhamaado shaqaalaha. Arrinkaasi wuxuu khuseeyaa shaqaalaha ugu yaraan muddo shan sano ah oo joogto ah u shaqaynayay shaqobixiyahaas waana in uu shaqobixiyuhu lahaadaa ugu yaraan soddon shaqaale.
Warbixin raadiska iyo adeegga macaamiisha
Adeegga macaamiisha ee xafiiska shaqada
La talinta ku socota macaamiisha shaqsiyaadka ah iyo kuwa shirkadaha ah waa taleefan ahaan iyo chat-ka.
Ma suurto galbaa in ay shirkaddu ku amarto shaqaalaha labo gallin in uu shaqeeyo muddada xaaladda caadiga ka baxsan lagu jiro, gallin hore iyo ku dambe?
Shaqada wakhtiga joogtada ah waa loo qabanqaabin karaa qaab gallinleh ah. Gallinleh waxaa laga dhigi karaa shaqo kasta oo aanan heshiiska shaqada ama shardiyada shaqada arrinkaas wax diidaya aanay ku qornayn. Shaqaalaha shaqooyinka gallinlaha ah ka shaqeeya shaqada ay qabanayaan waa inay isku nooc ahaataa laakiin khasab ma aha in ay gabi ahaan isku mid ahaato. Shaqobixiyuhu waa in uu sidoo kale ka warhayaa in shaqaalaha xuquuqdiisa shaqada nasiimada maalinlaha ah iyo ta todobaadlaha ahba ay u suuro galaan.
Shaqaalaha shaqadoodu ay gallinlaha tahay waa in ay isku badalaan shaqada si joogto ah hore looga sii heshiiyay. Gallimada shaqadu inay is baddaleen ayaa loo arkaa marka shaqaalaha isbaddalaya ay ugu badnaan hal saac ku wada jiraan shaqada ama shaqaalihii gallinka hore ku jiray uu ugu badnaan hal saac kahor inta aanu ka dambe iman ku sii jiro shaqada.
Shaqooyinka gallinlaha ah waa in qiimeyntooda lagu darsadaa liiska shaqooyinka gallinlaha ah oo ay waajib tahay in shaqaalaha la ogaysiiyaa wakhti hore oo ugu dambeyn hal isbuuc kahor intaanan la bilaabin shaqada wakhtiga loogu talo galay in ay bilaabato. Markaas ka dib liiska gallimada shaqada waxaa la badali karaa oo kaliya haddii uu shaqaaluhu arrinkaas aqbalo ama ay jirto sabab kale oo culus oo khasbaysa in dib loo habeeyo jadwalka shaqada.
Ma suuro galbaa in shirkaddu ay dib u dhigto bixinta mishaarka?
Sharciga heshiisyasa shaqadu wuxuu dhigayaa in ay tahay mishaarka in la bixyo maalinta u dambeysa ee muddada uu mishaarku ururayay marka la gaadho, haddii aanu jirin heshiis arrinkaas ka baxsan. Wakhtiga bixinta mishaarka waxaa macquul ah in loogaga heshiiyay heshiiska shaqada taasna waxaa dheer in noocyada kala duwan ee shaqooyinku ay leeyihiin awaamiir kala duwan oo ku saabsan bixinta mishaarka. Awaamiirtaas waxaa laga yaabaa inay yihiin kuwo qofka qabanaya.
Shaqobixiyaha uma banaana in uu kaligii go'aan ku gaadho in uu garab maro shardiyada shaqada ama heshiiska shaqada awaamiirta ku qoran ee isaga qabanaya. Haddii uu mishaarku dib u dhaco waxaa uu shaqaaluhu xaq u yeelanayaa dulsaarka raagitaanka. Haddii uu mishaarku dib u dhaco ka dib marka shaqaalaha ay shaqadu ka joogsato wuxuu shaqaaluhu xaq u leeyahay mishaar maalmaha uu sugayo ah oo ugu badnaan lix maalin ah.
Ayaa bixinaya mishaarka muddada xanuunka ama karantiinka? Ma suuro galbaa in ay shirkaddu magdhow ka hesho kharashkaas?
Haddii shaqaaluhu uu gabo awooddisa shaqo isaga oo xanuunsaday darteed, mishaarka uu xaq u leeyahay waxaa lagu qoondeeyay sharciga heshiiska shaqada iyo heshiiska shardiyada shaqada. Sida caadiga ah mishaarka muddada xanuunka waxaa loogaga sii heshiiyay shardiyada shaqada ee shaqooyinka kala duwan loo dajiyay, kuwaas oo loogu talo galay in lagu dheereeyo muddada bixinta mishaarka ee wakhtiga xanuunka marka la barbar dhigo sharciga shardiyada shaqada.
Kela-da ayaa bixinaysa lacagta maalinlaha ah ee xanuunka muddada uu qofku gabo awoodda shaqada. Lacagta maalinlaha ah ee xanuunka waxaa la bixiyaa inta uu qofku isagu mas'uulka ka yahay marka ay dhamaato. Muddada uu qofku isagu ka mas'uulka yahay badanaa waxaa weeyaan maalinta uu qofku xanuunsaday iyo 9-ka maalmood ee ku xiga. Sida caadiga ah shaqobixiyaha ayaa dalbada lacagta maalinlaha ah ee xanuunka haddii uu shaqobixiyuhu mishaar qofka siinayo muddada uu shaqada ka maqanyahay. Markaas Kela-da ayaa bixinaysa lacagta maalinlaha ah ee muddada xanuunka ee shaqobixiyaha la siinayo.
Haddii shaqaalaha lagu amro karantiin sharciga xanuunada faafa waafaqsan wuxuu xaq u leeyahay in uu helo 100 % oo ah lacagta maalinlaha ah ee xanuunada faafa muddada uu karaantiilka ku jiro. Haddii uu shaqobixiyuhu mishaar qofka siinayo muddadaas wuxuu shaqobixiyuhu xaq u leeyahay in uu isagu qaato lacagtaas maalinlaha ah.
Sharciga xanuunada faafa waxaa sidoo kale laga qoray shardiyo loogu talo galay xaaladda shaqaalaha ilmihiisa awgeed uu ku khasbanaado in uu karaantiin galo. Xaaladda noocaas ah xataa waxay kalifi kartaa in lacagta maalinlaha ah ee xanuunada faafa la bixiyo.
Haddii uu jiro karaantiin uu keenay safar shaqo waxaa loo arki karaa in maqnaanshuhu uu ku yimidday shaqobixiyaha sabab uu leeyahay markaasna shaqaaluhu wuxuu xaq u leeyahay mishaar in uu helo. Muddada safarka shaqada shaqaaluhu wuxuu ku khasbanyahay in uu safarkiisa shaqada isaga oo ku maqan uu karaantiinkiisa dibadda ku qaato. Safarka wakhtiga firaaqada ah karaantiilka ku xiga wuu ka duwanyahay ka hore loo sheegay. Arrinkaas wali qaab dhaqan sharciga ku sallaysan looma dajjinin hagitaan guudna lagama qorin. Waxaa saamayn yeelan kara tusaale ahaan in safarku uu lid ku ahaa talobixinta iyo awaamiirta masuuliyiinta dowladda iyo in kale.
Shaqaaluhu miyuu xaq u leeyahay mishaar haddii uu u xanuunsado koronaha?
Haddii shaqaaluhu uu koronaha dartii u xanuunsanayo (xanuunkaasi sabab uu keenay uu u gabay awooddiisa shaqo) xuquuqdiisa ku saabsan mishaarka muddada xanuunka waxaa looga sii heshiiyay shardiyada shaqada ee shaqooyinka kala duwan loo qoray.
Waalidka ilmaha koronaha qaba miyuu xaq u leeyahay in laga fasaxo shaqada muddada uu ilmaha xanaanaysanayo?
Haddii shaqaalaha ilmihiisa oo 10 sano ka yar uu qaado korona fayruska wuxuu shaqaalahaasi xaq u yeelanayaa in uu muddo cayimman ilmihiisa xanaanayntiisa fasax u helo. Fasaxa daryeelka ee wakhtiga cayiman waxaa lagu qoondeynayaa dhararkiisa shardiga heshiiska shaqada ee la isticmaalayo / sharciga heshiiska shaqada. Fasaxa daryeelka ee muddada cayimman muddada uu qofku ku jiro mishaarka la bixinayo waxaa lagu qiimeynayaa shardiga heshiiska shaqada ee shaqadaas loo dajjiyay.
Xaaladaha qaarkood waxaa shaqaalaha ku iman kara xaalado arrimaha qoyska la xidhiidha oo uu xaq ugu yeelanayo ka maqnananshaha shaqada (xanuunka ilmaha 10 sano ka wayn, ilmaha qofka kuu haynayay oo xanuunsada, xidhitaanka xanaano-maalmeedka ilmaha), xuquuqdan maqnaanshaha sabaabayntiisu waa kuwo aad u adag, laakiin way caddahay inaanan ilmaha la dayici karin. Maqnaanshahaasi waa mid bilaa mishaar ah (haddii aanan shardiyada heshiiska shaqada arrinkaas wax ka duwan lagu sheegin). Looguma talo galin maqnaansho dheer.
Cadaymo noocee ah ayaa qofka laga rabaa muddada uu xanuun dartii u maqanyahay wakhtiga fauryska koronaha?
Caddaymaha maqnaanshaha shaqada in uu qofku bandhigo waajibka ka saaran waxaa lagu qoondeeyay sharciga heshiisyada shaqada waxaana awaamiirta la xidhiidha lagaga hadlay sharciga heshiisyada shaqada. Arrinka fayrasku xilligga uu faafayo ee koronaha waxay ururada u dooda shaqaaluhu ka bixiyeen talobixino ku saabsan in ogaysiiska shaqaalaha oo kaliya ay ku filantahay bixinta mishaarka ee muddada xanuunka, si aanan culays loo saarin shaqaalaha daryeelka caafimaadka oo aanu cudurku u sii faafin.
Sharciga xanuunada faafa xaaladaha ay keenaan samaynta ay ku leeyihiin mishaarka waa maxay?
Hadii shaqaalaha lagu xukumo karaantiil lagu dajiyay sharciyada xanuunada faafa, wuxuu shaqaaluhu xaq u leeyahay 100 % oo kamid ah lacagta maalinlaha ah ee wakhtiga xanuunada faafa muddada uu karantiinka ku jiro. Haddii uu shaqobixiyuhu mishaar qofka siinayo muddadaas wuxuu shaqobixiyuhu xaq u leeyahay in uu isagu qaato lacagtaas maalinlaha ah.
Haddii aan shaqo dalbade ahay halkeen ka heli karaa macluumaadka la xidhiidha adeegyada xafiisya shaqo la'aanta (TE-toimistot)?
Macluumaadka ku saabsan adeegyada xafiisyada shaqo la'aanta waxaad ka heli kartaa bogagga internetka ee xafiisyada shaqo la'aanta. Xafiisyada shaqo la'aantu waxay adeegooda ku fulinayaan awaamiirta THL, Hay’adda maamulka goboladda (Aluehallintovirasto) iyo AVI. U adeegidda macaamiisha waxaa loo wareejiyay badankeeda internetka iyo taleefanka adeegga lagu bixinayo.
Adeegga ugu fiican ee ugu dhakhsaha badan waxaad heli kartaa marka aad isticmaasho adeegga ka daneyso (Oma Asiointi). Waxaad sidoo kale adeeggaaga ku dhammaysan kartaa taleefanka. Si aad u yarayso safafka dhaadheer, waxaad soo wacdaa xafiiska kaliya haddii arrin culus oo degdegsiyo u baahan uu jiro.
Haddii aanay kuu suurtogal ahayn in aad ka adeegato internetka ama taleefanka waxaad ka heli kartaa xafiisyada shaqada foomamka oo daabacaad ah. Macluumaadka xafiisyada kala duwan waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee xafiiska shaqo la'aanta > Nala macaamiil (Asioi meillä). Macaamiilka goobjoogga ah waa la xadaynayaa xaaladda korona fayraska darteed. Halkii marba goobta xafiiska ah waxaa joogi kara ugu badnaan 10 qof.
Marka aad ku dhaqmayso awaamiirta xafiisyada shaqada iyo masuuliyiinta daryeelka caafimaadku awaamirta ay dajjiyeen, xuquuqdaada shaqo la'aantu sidooda ayay ahaanayaan.
Macluumaad dheeri ah waxaad ka heli kartaa bogga adeegga xafiiska shaqada
Adeegyo noocee ah ayay xafiisyada shaqo la'aantu siinayaan shirkadaha muddada lagu jiro xaaladdan isbaddalka ah?
Adeegyada xafiisyada shaqo la'aanta iyo maareynta nolosha bogooda internetka waxaad ka helaysaa macluumaad ku saabsan shaqo ka fadhiisinta iyo nidaamka waxqabadka wadajirka ah. Haddii aad tahay shaqobixiye hoos yimaada sharciga waxqabadka wadajirka ah, waa in aad soo ogaysiisaa xafiiska shaqo la'aanta marka aad bilaabayso wadatashiga YT. Xaaladaha ka fadhiisinta shaqada waa in shaqaalaha si shaqsi ah loogu sheegaa ogaysiinta ka fadhiisinta shaqada. Haddii shaqaale badan aad ka fadhiisinayso shaqada waxaa macquul ah in xafiiska shaqo la'aantu uu talobixin shirkadaha gaar u ah siiyo oo la xidhiidha shaqo ka fadhiisinta.
Shaqaalaha laga fadhiisiyo shaqadu waxay xaq u yeelanayaan isla muddada ka fadhiisinta shaqada lagu jiro adeegyada amniga isbaddalka ee xafiiska shaqo la'aanta. Adeegaas waxaa shaqaalaha lagu siinayaa caawimaad ku saabsan dalbashada shaqada iyo dib u shaqaalaysiinta tababaro iyo koorsooyin lagu caawinayo.
Goorma ayay tahay shaqobixiyuhu in uu shaqaalaha ogaysiiyo shaqo ka fadhiisinta?
Ogaysiinta shaqo ka fadhiisinta muddada loogu talo galay waa la soo gaabiyay waxaana laga dhigay shan maalmood halkay awal ka ahayd 14 maalmood. Isbaddalkani wuxuu jirayaa muddo cayimman. Si kale haddii hadalka loo dhigo, shaqobixiyuhu wuxuu ku khasbanyahay in uu ogaysiiyo shaqo ka fadhiisiinta shaqaalihiisa shan maalmood ka hor inta aanan shaqada laga fadhiisin.
Isbaddalku wuxuu shaqaynayaa 1.4.–31.12.2020. Taas waxaa lagu caawinayaa shirkadaha si ay uga dabaashaan dhibaatooyinka culus ee kadiska ah si ay uga badbaadaan in aynan u kicin haddii laga fursan karo.
Isbaddalkaasi ma saameynayo muddada ogaysiinta ka fadhiisinta shaqada ee shaqooyinka dowladda.
Fiiro gaar ah u yeelo! Shardiyada heshiisyada shaqada qaar badan oo ka mid ah waxaa loo dajjiyay awaamiir la xidhiidha shaqo ka fadhiisinta. Haddii shaqobixiyuhu uu leeyahay amar arrinkaas ku saabsan waa in amarkaas la fuliyaa oo aanan la fulin sharciga. Koronaha dartii ayaa shaqooyin badan looga dajjiyay arrimo xal u noqonaya xaaladan isbaddalka ah. Kuwaas waxaa laga warsan karaa ururada u dooda shaqaalaha.
Sidee loo fulinayaa sharciga waxqabadka wadajirka ah muddada lagu jiro xaaladda fayruska koronaha?
Sharciga waxqabadka wadajirka ah qodobkiisa 8 waxaa lagu dabaqayaa waxabadka fiirada gaarka ah ee shaqobixiyaha ku sallaysan oo keeni kara in hal ama dhowr shaqaale shaqada laga joojiyo, shaqada laga fadhiisiyo ama in wakhtiga shaqadiisa la soo gaabiyo iyada oo lagu salaynayo sababo wax soo saarka la xidhiidha ama dhaqaalaha la xidhiidha. Haddii uu shaqo bixiyuhu waxqabad noocaas ah ka fikirayo waa in uu qoraal wada tashi ah oo qoran bixiyaa ugu dambayn shan maalin kahor inta aanan wadatashiga la gaadhin.
Shaqobixiyuhu markuu bandhigayo waxqabadyo keeni kara shaqaale in shaqada laga joojiyo, in laga fadhiisiyo ama in wakhtiga shaqadiisa la soo gaabiyo waa in bandhigga wadatashiga ama macluumaadka ku qoran iyaga oo qoraal ah loo gudbiyaa xafiisa shaqada ugu dambayn marka uu waxqabadka wadatashigu bilaabmo, haddii aanan macluumaadkaas hore loogu soo dirin qaab kale.
Macluumaadka khuseeya wadatashiga waxqabadka ee ka fadhiisinta shaqada waa laga soo gaabiyay lixda todobaad ee uu hore u ahaa waxaana laga dhigay 14 maalmood. Muddada wadatashiga waxaa loo soo gaabiyay maadaama shirkadaha awooddooda dhaqaale ee xaaladan koronuhu ay keentay aanay saamaxaynin muddada wadatashiga oo la dheereeyo. Isbadalkani wuxuu shaqaynayaa 1.4.–31.12.2020.
Marka shaqobixiyaha shaqada laga joojinayo ama in shaqada loo soo gaabiyo laga heshiinayo waxaa wali lagu dabaqayaa 14 maalin iyo lixda todobaad ee wadatashiga ah.
Garab maridda nidaamka waxqabadka wadatashiga ee xaaladaha qaarkood
In sharciga waxqabadka wadatashiga marmar la garab maro waxaa laga dhigay macquul xaaladaha qaarkood. Shaqobixiyaha waxaa u bannaan in uu go'aan ku gaadho inaanu marin wadatashiga waxqabadka wadajirka ah haddii aynan macquul ahayn sababo waxsoosaar ama dhaqaale awgood ama haddii shirkadda ay jiraan sababo culus oo khasaare dhaqaale ku keenaya oo aanan markii hore lagu sii tashanin.
In la garab maro shuruud baa ku xidhan taas oo macnaheedu ay tahay in ay jiraan sababahan xiga 1) shirkadda wax soo saarkeeda ama waxqabadkeeda adeegga dhaawac wax ku keeni kara 2) si saa'id ah u culus 3) aanan hore loogu sii talo galin. Qoraalada sharciga waxaa lagu sheegay in shaqobixiyaha baahidiisa ah in uu shaqada ka joojiyo ama ka fadhiisiyo shaqaalaha xaaladda dhaqaale ee jirta awgeed ama shirkadda dalabaadkeeda oo si saa'id ah hoos ugu dhacday ma aha sabab loo garab maro waajibaadka wadatashiga wadajirka ah haddii aanay jirin sabab dheeri ah oo kallifaysa.
Shaqobixiyuhu waa in uu si degdeg ah u bilaabaa waxqabadka wadatashiga ah, marka sababaha xagga hore lagu soo sheegay ee sharciga loo garab mari karo aanay jirin.
Fiiro gaar ah u yeelo! Shardiyada heshiisyada shaqada qaar badan oo kamid ah waxaa loo dajjiyay awaamiir la xidhiidha shaqo ka fadhiisinta. Haddii shaqobixiyuhu uu leeyahay amar arrinkaas ku saabsan waa in amarkaas la fuliyaa oo aanan la fulin sharciga. Koronaha dartii ayaa shaqooyin badan loo dajiyay arrimo xal u noqonaya xaaladan isbaddalka ah. Kuwaas waxaa laga warsan karaa ururada u dooda shaqaalaha.
Mudddada tijaabada shaqada miyay ku yimaadeen wax isbaddal ah oo khuseeya darajada shaqada ee shqaalaha?
Sharciga heshiiska shaqada iyo sharciga heshiiska shaqada badda waxa lagu sameeyay isbaddal u suuro galinaya shaqobixiyaha in uu burin karo heshiiska shaqada ee shaqaalaha ku jira muddada tijaabada isaga oo ku tiirsanaya sabab dhaqaale ama sabab wax soo saar sida uu sharcigu dhigayo. Sabab wax soo saar ama sabab dhaqaale waxa loola jeedaa in shaqada dhaqaalaha ay soo saarayso ama wax soo saarkeedu ay si muuqata u yaraadeen yadoo xaaladda jirta ay keentay hoos u dhacaas ayna tahay wax joogto ah. Intaanan la fulinin burinta muddada tijaabada waxa habboon in la qiimeeyo in ay suuro gal tahay in arinkaas uu suuro gal noqonayo in looga wareego yada oo tusaale ahaan shaqaalaha shaqo kale loo dirayo ama shaqo kale loo tababarayo.
Burinta heshiiska shaqada ee muddada tijaabadu waxa uu keenayaa in ay shaqadu dhamaato wakhtiga go’aankaas burinta la gaadho haddii aanu heshiiska shaqadu dhigaynin in la fuliyo muddada ka joojinta shaqada.
Isbaddalkan waxa uu shaqaynayaa 1.4.–31.12.2020. Isbaddalka laguma fulinayo shaqooyinka dowladda. Shaqaalaha u shaqeeya dowladda heshiisyadooda shaqada shardiyada ku yaalaa iyada oo la kaashanayo shaqada waa laga joojin karaa laakin muddada ka joojinta shaqada waa in la fuliyaa.
Ma wax isbaddal ah ayaa ku yimiday waajibka soo celinta shaqaalaha ee shaqobixiyaha?
Haa. Sharciga heshiiska shaqada iyo sharciga shaqada baddu waajibka ay dhigayaan ee soo celinta shaqaalaha waa la dheeraynayaa muddadan lagu jiro xaaladan dheeraadka ah waxana laga dhigayaa halkii ahayd afar bilood ama lix bilood sagaal bilood. Isbadalkani wuxuu shaqaynaya 1.4.–31.12.2020. Soo gaabinta muddada soo celinta waxa lagu fulinaya heshiisyada shaqada ee la burin karo muddada sharcigu uu jiro. Goorta shaqadu ay dhamaatay saamayn kuma laha.
Waajibka soo celinta ee dheer wuxuu khuseeyaa shaqaalaha muddada uu sharcigani jiro shaqada looga fadhiisiyay iyada oo ay sabab u ahayd dhaqaalaha ama wax soo saarka shirkadda oo hoos u dhacay iyadoonan loo eegaynin heshiiska shaqada ee shaqaalaha muddadiisa.
Isbadalkan luguma fulinayo shaqooyinka dowladda. Shaqooyinka dowladda sidii caadiga ahayd ayaa mudda u dhaxaysa 1.4 –31.12. wali loo sii fulinayaa heshiiska shaqada iyada oo uu ku xidhanyahay afar ama lix bilood oo ah muddada waajibka soo celinta.
Ma suuro galbaa in shaqaale muddo cayiman shaqaynayay laga fadhiisiyo shaqada?
Shaqobixiyaha waxa u banaan 1.4.2020 laga bilaabo in uu shaqada ka fadhiisiyo shaqaalaha u shaqaynayay mudadda cayiman ee ku shaqaynaya shardiyada shaqada ee la midka ah shaqaalaha mudadda aan la cayimin (joogto) u shaqaynayay. Isbaddalkani waxa uu shaqaynayaa saddex bilood oo ku eeg 31.12. 2020.
Sharciga heshiiska shaqada waxa lagu qoondeeyay sababaha shaqaalaha shaqada looga fadhiisin karo. Ilaa imika waxa uu dhigayaa in shaqada laga fadhiisin karo shaqaalaha haddii xaaladda wax soo saarka ama xaaladda dhaqaalaha ee shirkaddu ay keentay in awoodda dhaqaale ee shirkaddu aanay saamaxayn in shaqaalahaas la sii haysto taasna ay dheertahay in aanu shaqobixiyuhu awood u lahayn in uu dib u tababaro shaqaalaha ama uu ku wareejiyo shaqo kale.
Isbaddalkaas laguma fulinayo shaqooyinka dowladda. Sidaas darteed shaqaalaha u shaqeeya dowladda suuro gal ma aha in shaqada laga fadhiisiyo. Siyaabaha kaliya ee looga fadhiisin karo waxa weeyaan haddii shaqaalaha qabanaya shaqada muddada cayiman uu ku sii simayay shaqada shaqaale boos joogta ah haystay oo shaqada laga fadhiisinayo
Ma waxa la isticmaalayaa heshiisyada shardiyada shaqada ogaysiintooda shaqo ka fadhiisinta iyo waajibaadka wadatashiga misa waxaa la isticmaalayaa sharciga ku meel gaadhka ah shardiyadiisa kuwa la midka ah?
Sharciga heshiisyada shaqada iyo sharciga waxqabadka wadatashigu waxay dhigayaan in ururada shaqaalaha iyo shaqobixiyaha ee waddanka ka jiraa ay ka leexan karaan sharciga heshiisyada shaqada wakhtiyada ay dhigayaan ee ogaysiinta fasax gelidda iyo waajibaadka soo celinta shaqaalaha iyo sidoo kale sharciga waxqabadka wadajirka ah muddadiisa wada tashiga shardiyada khuseeya. Taas macnaheedu waxaa weeyaan in shardiyada shaqada heshiisyadooda awaamiirta ku jiraa ay mudnaanta koobaad leeyihiin marka sharciga la barbar dhigo.
Heshiisyada shaqada ee lagu dabaqo shardiyada heshiisyada shaqada waxaa loo isticmaalayaa in si caadi ah ay u qabato in la fuliyo shardiyada heshiisyada shaqada. Taas waa la fulinayaa xataa haddii heshiiska shardiyada shaqada lagu heshiiyay shan maalmood muddo ka badan ama muddo ka gaaban oo loogu talo galay in lagu sameeyo ogaysiiska wakhtiyada wadatashiga.
Shaqo bixiyaha is nidaamiyay marka uu shaqaalaha shaqada ka fadhiisinayo waa in uu xasuusnaadaa in uu hubiyo, in ay jiraan heshiiska shaqada shardiyada ku qoran in loo go'aamiyay muddada loogu talo galay ee ugu yar ee ay tahay in qofka lagu ogaysiiyo iyo awaamiirta shardiyada ku qoran waxa ay yihiin muddada u dhaxaysa 1.4–31.12.2020.
Heshiiska shaqada ee shardiyada shaqada caadi ahaan sida uu shaqobixiyaha u qabanayo marka la hubinayo waa in la ogaadaa waxa ay yihiin shardiyada khuseeya ogaysiiska shaqo ka fadhiisinta mniyo awaamiirta la xidhiidha.
Awaamiirta sharciga ee khuseeya muddada ogaysiiska ka fadhiisinta shaqada iyo wadatashiga ee la soo gaabiyay lama fulinayo haddii heshiiska shaqada aanay ku oolin shaqobixiyaha shardi qabanaya oo khuseeya ogaysiiska ka fadhiisinta shaqada ama wakhtiga wadatashiga awaamiir la xidhiidha.
Waxaa la cusboonaysiiyay 8.10.2020
Isbaddalada wakhti xaadirkan jira intee in leeg baa la gaadhsiiyay heshiisyada shardiyada shaqada?
Sharciga heshiiska shaqada iyo sharciga waxqabadka wadajirka ah isbaddalada lagu sameeyay waxay ku sallaysanyihiin ururada shaqaalaha iyo shaqobixiyeyaashu 18.3.2020 dowladda soo jedintii ay siiyeen ee loogu talo galay in lagu fududeeyo xaaladda shirkadaha ee muddada xaalladan faafitaanka koroonaha iyo ka hor tagga kicidda shirkadaha. Ururada shaqaalaha iyo shaqobixiyeyaasha ayaa ku talinaya isku tagyada xubnaha ka ah in ay baddalaan muddo cayimman shardiyada heshiisyadooda shaqada. Badankooda oo ah qiyaastii 90 brosent oo ka mid ah shardiyada waa lagu fadhiisiyay isbadallada cusub.
Iskutagga ururada shaqada iyo maareynta nolosha EK ayaa boggooda internetka bogooda internetka galiyay macluumaad ku saabsan heshiisyada ururada xubnaha ka ah EK ay gaadheen ee ku saabsan wadatashiga ka joojinta shaqada, wakhtiyada ogaysiinta ka fadhiisinta shaqada iyo waajibaadka dib usoo ceshashada shaqaalaha. Bogga Ek waxaa sidoo kale laga heli karaa linkiyada laga sii gali karo bogagga internernetka ee ururada xubnaha ka ah iyo macluumaadka dheeriga ah ee ka hadlaya isbaddalada la sameeyay.